Yiziphi izibuyekezo: i-Jack Russell Terrier
Abaningi bafa ngalusuku movie edumile "The Mask" akuyona kuphela brilliant umdlalo nosomahlaya Dzhima Kerri, kodwa futhi ngoba umngane wakhe - fun and inja bouncy Milo. Lokhu indima baletha emhlabeni udumo inja ukuzalela Dzhek Rassel Terrier. Baqala ukwenza ngisho labo akazange ziphuphe ukuba abe inkosi isilwane ezine-ezinemilenze. Futhi nabo charm isikrini lidlalwa ihlaya angaba nonya kangako, njengoba abanye Izibuyekezo baye baphetha. Dzhek Rassel Terrier kwabonakala kubo yenkani kakhulu, inja nomdlandla ngokweqile futhi kunzima. Ayemaningi ungakakulungeli izimfanelo ezinjalo, isola, ngenxa yalokho, zohlobo. Kodwa njengoba besho, akuyona inja embi, futhi ngezinye izikhathi ezimbi umzali aphethe iluhlaza. Woza nathi ukuthola kangakanani ngempela izinto, futhi lokho abakushoyo kukhona Izibuyekezo eziningi.
Dzhek Rassel Terrier. Inja-hunter futhi bakhe imisuka
Umlando zohlobo has cishe emakhulwini amabili eminyaka. Ngamphathela i Umfundisi isiNgisi zizingelwe: wayedinga inja ngoba abazingela izilwane ezincane ezifana izimpungushe, amagundane. Dzhek Rassel Terrier kwaba umphumela cross-zizalela kungenzeka abameleli terriers nokulwa izinhlobo. umfuyi yangaphandle is hhayi ikakhulukazi wamhlupha ezibalulekile "ukusebenza" njengoba sekuvele uhlobo olusha. Ngakho inja Dzhek Rassel Terrier ubukeka kancane Clumsy nezingahloniphekile. Nokho lokhu kungaphandle kwesiko engasenathonya wakhe futhi evelele ezivuma uthando ezinhle lezi izinja, njengoba kufakazelwa Izibuyekezo eziningi.
Dzhek Rassel Terrier. Izici zohlobo nokuqukethwe
Njengoba sekushiwo, kuba - inja-umzingeli. On ukuzingelwa, yena "isebenza" nezinye izinja, ngokusiza "awuthunqise out" isisulu umgodi ipeni. Lezi zimfanelo zidinga izinja amandla, esebenzayo, lisebenza. Ubukhulu bayo ezincane zingase zidukise umnikazi ongenalwazi, kuyilapho Dzhek Rassel terrier - ihlule, ihlule bamandla akhe awapheli, ukulungele ukuchitha amahora ku izizinda wakhe. Kuyadingeka ukuba ucabangele zonke labo abahamba ukwenza terrier ezinjalo. Yena iyasebenza ngakho, jumpy futhi udlubulunda, ukuthi sihambe isigamu sehora naye kutsi angeke atente. Lolu hlobo kudinga njalo, isikhathi eside-ibanga eliphezulu, oluhambisana izakhi ukuqeqeshwa, ukuvivinya umzimba, imidlalo ukuze awushise zineminyaka amandla. Kungenjalo, ulungele yokuthi amabutho engasetshenzisiwe Dzhek Rassel Terrier elizozenza ekhaya lakho ifenisha futhi bengenazo izicathulo, njengoba kufakazelwa omunye non-eziwubala.
Dzhek Rassel Terrier. Ikakhulukazi ukusuthisa nemfundo
Ukuze ondle umngane wethu kudingeka okungenani izikhathi 2 ngosuku, futhi ngokucophelela ukuqapha indlela yokudla kanye nokuzivivinya ingxenye. Iqiniso lokuthi Dzhek Rassel Terriers zithambekele akhuluphele ngenxa yokuthi abazi izinyathelo e ukudla. Futhi, isisindo okweqile kungenzeka kubangelwa ukungawuvivinyi umzimba, ngakho ake inja umthwalo njalo. Njengoba nje ingane Dzhek Rassel uvele nomndeni wakho ngokushesha uqoke kuye esikhundleni sakhe. Kwezemfundo kumelwe babe nesandla esiqinile, ungavumeli ukugwavuma ngawe, zavuza yakho ukuvikela ukudla yakho. Uma ukuyeka nokunensa, washeshe kuthatha phezu kwakho, ukuthatha indawo ehola 'iphakethe "yakho. Uma inja kuba abangalawuleki noma ukuvimbela lokhu, ezihilela imfundo lwabo. i isibambi abanolwazi, ukuya ezindaweni ezikhethekile sokuhamba. Lolu lwazi kuphela jikelele, futhi ikakhulukazi okuqukethwe Dzhek Rassel terrier zohlobo. Izimpendulo ezivela kulabo abaye nesineke nokuphikelelayo isimo ukuthi lezi izinja - emangalisayo nabangane nabangane, kanye abahlengikazi ezizodlala nazo komncane kunabo amalungu omkhaya - izingane, okungukuthi kakhulu esiyigugu, ngoba izinja zalolu hlobo do hhayi imbangela komzimba, sibonga yayo ekhethekile uvolo .
Lo mntwana njalo naughty futhi bekhala becela - yini okumele ngiyenze?